Voka-dratsy: Andromeda, nila "Patch 1 andro" ary tsy tonga | Vaovao momba ny gadget
Voka-dratsy: Andromeda, nila "Patch 1 andro" aho ary tsy tonga
Betsaka aminareo, indrindra ireo mpilalao indrindra, no mahalala tsara ny tiako holazaina amin'ilay hoe "Day 1 Patch". Izy ireo no patch na fanavaozana mahazatra navoakan'ny orinasa mpamorona amin'ny andro fandefasana ofisialy ny lalao. Amin'ny lafiny iray, izy ireo dia tena manahirana ny mpampiasa izay te hampiditra ny lalao fotsiny ary manana fotoana mahafinaritra, satria mahatonga azy ireo hahavery fotoana be dia be maimaim-poana, na izany aza, amin'ny tranga maro dia tena ilaina tokoa izy io, satria ny sasany ny lesoka misy azy ireo dia afaka miditra an-tsokosoko amin'ny fandaharana mitovy amin'izany dia mety hiteraka fanandramana lalao mahafinaritra kely na tsia. Na izany aza, misy ny lalao izay ny "Day 1 Patch" dia tsy azo ekena, Mass Effect: Andromeda dia iray amin'izy ireo, ary tsy nanao izany izy ireo.
Ny fandefasana lalao miaraka amina bibikely marobe dia mety hanome endrika tsy maha-matihanina, na izany aza, noho ny fivoaran'ny lalao sasany, afaka mahazo hevitra isika ary mahatakatra fa misy tsy fahombiazana. Na izany aza, Ny sary ratsy indrindra dia rehefa novolavolaina ny tambajotra iray manontolo noho ny isan'ny bibikely entin'ny lalao iray, ary ny orinasa tsy manelingelina manome toky ny mpilalao fa hitany fa afaka mizara vola be dia be mba hankafizany ny lalao amin'ny andro voalohany.
Ary ny Electronic Arts ve tsy niasa akory nanambara patch azo atao hamaha ireo olana maro momba ny sarimiaina izay Mass Effect: Andromeda manintona. Memes na aiza na aiza, GIF ary mazava ho azy, horonan-tsary. Tena, Reharehan'ny BioWare ny zava-bitany, satria izy ireo dia nampanantena ny maoderina fihetsika sy fihetsika maoderina indrindra hita hatramin'izayNa izany aza, mavesatra ny vokany, zavatra toy ny nataon'ny Electronic Arts tamin'ny FIFA taona vitsivitsy lasa izay, nanehoana motera Frostbite tsy tanteraka. Hanohy hiandry ny famoahan'ny BioWare fanavaozana izahay mandritra izany fotoana izany, ankafizo ireo meme ...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Voka-dratsy: Andromeda, nila "Patch 1 andro" aho ary tsy tonga
Mavesatra kokoa ny lalao amin'ny Nintendo Switch raha ao anaty fitadidiana anatiny izy ireo